Inowanikwa Razor-qt: Mumwe weLXDE muQT | Kubva kuLinux
Inowanikwa Razor-qt: Mumwe weLXDE muQT
Razor-qt Icho chirongwa chinonakidza zvechokwadi, nekuti icho chinotipa idesktop diki rakagadzirwa nepaneru ine menyu uye majeti, yekushandisa application, uye ine mwero yekumisikidza nzvimbo. Zvese izvi zvakanyorwa mu Qt.
Shanduro 0.4 yakaburitswa nenhau dzinonakidza:
1 Zvitsva zvitsva
2 Dzimwe shanduko
razor-mumhanyi chirongwa: chishandiso kuvhura mashandisiro.
razor-config * zvishandiso: hzvishandiso zvekugadzirisa.
razor-qt menyu: yavo yega menyu inotevera XDG zviyero.
Zvimwe zvipembenene zvakagadziriswa uye kunatsiridzwa kwakawedzerwa.
Kuvandudzwa kweshanduro yemutauro.
Nyaya itsva mego ine mavara erima.
Ekugadzirisa dialog akawedzerwa.
Plugin nyowani yekudzikisa zvishandiso uchishandisa udisks.
Nyowani plugin yekukiya skrini.
Nyowani plugin yekudzoreredza desktop.
Tsigiro yekukwevera uye kuwedzera plugins.
Razor-qt inoshanda neWMS yakati wandei (Windows Maneja), asi vazhinji vanogadzira Razor vanoshandisa Openbox. Asi hapana dambudziko kushandisa wwwm2 o KWin. Mirayiridzo yekuisa inogona kuwanikwa ye Ubuntu, vhura, ArchLinux y Fedora. Ini pachangu ndichaedza kuiisa ndichishandisa iyo PPA de Ubuntu, kuona kana ndichigona kuishandisa mukati Debian. Ivo vanogona kuwana rutsigiro pa Google Mapoka. Uye senge chero chirongwa chakanaka chinoremekedzwa, tinogona kuchiwana mu GitHub 😀
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Inowanikwa Razor-qt: Mumwe weLXDE muQT
Iyi nharaunda yakatsemura zai rapfuura uye chikamu cheimwe chekare
Hongu, asi ichi chitsva kugadzirisa, kusvika 0.4 😉
Ndakazvitaura nemusoro wenyaya pamusoro pezvose, zvinoita sekunge ndaisamuziva zvachose
Dai ndaiziva Kushinga, pachokwadi ndaishandisa kamwe .. Akangokutsvagira musikana zvekuti unototambisa nguva yako urege kubata mabhora angu .. Niñato
Aiwa ndatenda, zvinoitika kuti izvo zvakafanana zvinoitika kwauri naamwene, uye nenzira, chirevo chakabuda kaviri.
Ndiko here kuti zita racho raindiudza kuti hauna kumuziva
Ndakaverenga nezvazvo ichinyanya kutsamira pa KDE-Base, sezvo ichingonyora KDE maapplication. Unogona kuzvitsigira here? Ndine iyo yakaiswa mu chakra, saka handina kukwanisa kutaura neimwe nzira: P.
Inouya muChakra repositori kana mabunduru kana ccr?
Uye inogona kuiswa muchiSpanish?
Ndinoziva kuti zvinogona kuitwa, asi chokwadi ndechekuti ini handina kuyedza nekuda kwekushaya nguva
Handina kumuziva, ndatenda nezano! Ndangoisa pairi ArchLinux via AUR. Pakutanga kuona zvinoshanda chaizvo, uye zvinotaridzika zvakanaka! Ini ndichave ndichiiyedza kwemazuva mashoma kuti ndione kana ichindipa chivimbo.
Zvakanaka ini ndangoisa muDebian kuyedza uye ndiri kuishandisa panguva ino, ini ndichatanga kutadza nayo, hahaha. Inotaridzika kunge inonakidza kwazvo.
Kana chero munhu achifarira kuisirwa, yaive neiyo Ubuntu Oneric PPAs.
Izvi zvakafanana ne mini-kde, inoshandisa mashoma zviwanikwa handiti? Ndiri kuzozviratidza, makadii 😀
Izvo zvakafanana neLXDE asi ne qt.
Ehe, hazvo, haigone kutariswa seyakazara seLXDE uye inoshandisa zvimwe zviwanikwa, asi iri imwe nzira yakanaka. Kunyangwe parizvino ichiri yakati svibirei.
Kuisa Razor-qt mukubaya kamwe chete muVhuraSUSE ona chinyorwa ichi: http://guiadelcamaleon.blogspot.com.es/2012/09/como-instalar-razor-qt-041-en-opensuse.html
Hakuchazovazve neJava kubva kuOracle muUbuntu
Boomerang Gtk, theme yakanakisa yeGnome uye Xfce